‘सुस्ताएको रंगमञ्चलाई पुस्ता हस्तान्तरण आवश्यक’: गोपाल देवान - Koshi Online
‘सुस्ताएको रंगमञ्चलाई पुस्ता हस्तान्तरण आवश्यक’: गोपाल देवान
पुस्ता हस्तान्तरण गर्न नसक्दा धरानको रंगमञ्चले निरन्तरता पाउन नसकेको एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका छन् । १९९७ देखि सुरु भएको धरानका रंगमञ्चमा विभिन्न धारहरू परिवर्तन हुँदै नाटक प्रदर्शन भएपनि पुस्ता हस्तान्तरण हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।
गत मंगलबार आरम्भ नाट्य डबली धरानको २९ औं स्थापना दिवसमा डबलीका अध्यक्ष गोपाल देवानले रंगमञ्चमा क्रियाशील नाट्याकर्मीहरू पुस्ता हस्तान्तरण नगरी व्यावहारिक सञ्जालमा फस्न थालेपछि रंगमञ्च सुस्ताउँदै गएको बताए । उनले भने, ‘सुस्ताउँदै गएको रंगमञ्चलाई थाम्दै छिटपुट नाटकको प्रस्तुती भएपनि रहरको रूपमा मात्रै आयो, अब धरानको नाटकलाई प्रतिबद्धताको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।’ सुस्ताएको रंगमञ्चलाई १६ वर्षपछि पुन: निरन्तरता आरम्भले एक वर्षदेखि कार्यक्रमहरू सन्चालन गरिरहेको उनले बताए । रंगमञ्चलाई निरन्तरता दिँदै आरम्भले वर्ष दिनमै तीनवटा कार्यशाला गोष्ठीसहित नाटक प्रदर्शन गर्दै भोलिका लागि आशलाग्दा कलाकारहरू पनि उत्पादन गरिसकेको उनले बताए ।
उनले रंगमञ्चको अभावले पनि यसको विकास हुन नसकेको बताए । मञ्चको अभाव हुँदा नाटक प्रदर्शन महङ्गो हुने भएकाले टिकट बिक्रि गरेर नाटक मञ्चन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको गुनासो छ । अब स्थानीय सरकार आइसकेको अवस्थामा धरानको रंगमञ्चलाई पुनर्जागरण गराउनमा स्थानीय निकाय र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभामा रहेका जनप्रतिनिधिको भुमिका महत्वपूर्ण रहने उनले बताए । सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य जयकुमार राईको प्रमुख आतिथ्यमा किराँत याख्खा छुम्मा सुनसरीको सभाहलमा भएको स्थापना दिवसमा विशेष अतिथी प्रा.डा. टंक न्यौपानेले पुस्ता हस्तान्तरण अबको आवश्यकता रहेको बताउँदै राष्ट्रलाई आत्मा दिने काम कलाले मात्र गर्ने भएकाले यसको जगेर्ना गर्ने काम राज्यको रहेको धारणा राखे ।
स्थापना दिवसको शुभकामना दिँदै प्रमुख अतिथी सांसद राईले पुस्ता हस्तान्तरण नहुँदा वर्तमान पुस्ताले नाटक पढेपनि मञ्चन गर्ने विषयमा अनविज्ञ हुँदै गएको बताए । उनले भने, ‘नयाँ पुस्तालाई नाटक मञ्चनको विषयमा जानकारी दिन पनि रंगमञ्चको आवश्यकता छ ।’ उनले देशमा भएका परिवर्तनहरूमा नाटक, कला तथा साहित्यको महत्वपूर्ण योगदान अब देश विकाससँगै संविधानले दिएको अधिकारका विषयमा नेता र जनता सबैलाई सचेत गराउने विषयमा नाटक लेखन र मञ्चन हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न अब लेखन र नाटक मञ्चन हुनुपर्छ’, उनले भने । कला क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गर्दै कला क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरी अघि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
दिवसको अवसरमा रंगमञ्चको उत्थानका लागि कलम चलाउने एक पत्रकारलाई नगदसहित सम्मान पनि गरिएको छ । डबलीका महासचिव सचिन क्षेत्रीले स्थापना गरेको प्रश्नाभक्त रंग पत्रकारिता पुरस्कार ब्लाष्ट दैनिकका सम्वाददाता भोजराज श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ । नगद ११ हजार १ सय रुपैयाँसहित दोसल्ला ओढाएर प्रमुख अतिथी सांसद राईले उनलाई सम्मान गरेका हुन् । कार्यक्रममा ‘पन्चीते मामा’ नामक नाटक पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।
‘मिटू’ अयिानलाई केकी र रेखाको साथ, सहभागी हुन सबैलाई आग्रह
सन्नी लियोनीले कहाँबाट चोरिन् उनको नाम ? यस्तो छ कहानी !
दीपिकाले रणवीरसँग बिहे गर्ने भएपछि कपिल शर्माले पनि तय गरे विवाहको मिति !
करिष्मासहित ५ सय नेपाली कलाकारसँग अमेरिकी ‘ग्रीनकार्ड’, भुवन केसीले लिन मानेनन् !